CBD Van Denver Ayaa Lagu Soo Bandhigay Shirka Caalamiga ah ee Hemp (IHS) • Dawooyinka Inc.eu
CBD ee Denver ayaa ku soo bandhigeysa Shirka Caalamiga ah ee Hemp (IHS)
CBD ee Denver, Inc. (OTC Pink: CBDD), oo ah shirkad buuxda oo CBD iyo saliid hemp ah iyo soo saare iyo qaybiyaha xashiishadda iyo alaabada CBD ee Switzerland, Yurub iyo Mareykanka, waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo in kooxdeeda maamul ay ku soo bandhigi doonaan Shirka Caalamiga ah ee Hemp. markay ahayd Luulyo 22, 2021.
Hadday "Dhacdada Ganacsiga ee Warshadaha Caalamiga ah ee Hemp" Shirka Caalamiga ah ee Hemp 2021 wuxuu diiradda saarayaa isbeddellada ugu dambeeyay ee xagashahal-abuurnimo. Shirka ayaa lagu soo bandhigi doonaa khubaro wershadaha, aqoonyahanno iyo ganacsato ku lug leh beerista hemp, cilmi baarista iyo ganacsiga. Marcel Gamma, agaasimaha guud ee CBD ee Denver, ayaa hadli doona inta uu soo bandhigayo “Suuqa Xashiishadda ee Switzerland iyo Yurub - Fursad Gaar ah” iyo sidoo kale doorka Denver CBD oo ah mid ka mid ah ciyaartoyda muhiimka ah ee suuqan.
Shaqsiyaad caan ah oo caan ka ah warshadaha xashiishadda adduunka ayaa lagu matali doonaa shirka, oo ay ka mid yihiin Joy Beckerman, Guddiga Agaasimayaasha, US Hemp Roundtable, Geoffrey Whaling, Madaxweynaha - National Hemp Association, Lorenza Romanese, Agaasimaha Maamulka, Ururka Yurub ee Hemp Association. , oo ka mid ah wakiillada kale ee caanka ah ee warshadaha xashiishadda adduunka. Halkan guji si aad uqorto dhacdo.
Ku saabsan CBD ee Denver, Inc.
CBD ee Denver, Inc. (OTC Pink: CBDD), oo ah shirkad buuxda oo CBD iyo saliida hemp ("CBDD") waa soo saare iyo qeybiyaha xashiishadda iyo alaabada CBD ee Switzerland, Yurub iyo Mareykanka. Shirkaddu waxay diiradda saareysaa adeegsiga sinnaanta si ay ugu hesho hanti Swiss faa'iido leh qiimeyn soo jiidasho leh si loogu abuuro qiime dhammaan saamileydayada, taasoo ay horseed ka tahay hammi lagu horumarinayo nolosha iyo awood siinta bulshada iyadoo la siideynayo awoodda buuxda ee xashiishka.
Akhri wax dheeraad ah finance.yahoo.com (Source, EN)
Maalgashadayaasha qaar waxay sameyn doonaan malaayiin xashiishad ah, laakiin inbadan oo kale ayaa waayi doonta lacag aad u badan. Taasi waxay qortaa ...
Aphria iyo Tilray waxay ku milmeen xashiishka weyn
Laba ka mid ah shirkadaha xashiishka ugu waaweyn Waqooyiga Ameerika ayaa lagu wadaa inay adduunka wada qabsadaan. Tilray iyo Aphria waxay ku dhawaaqayaan ...